PressReader - Isolezwe: 2018-06-14 - Lo mkhuba wokucekela phansi uyisikhubekiso ezweni lethu
Lo mkhuba wokucekela phansi uyisikhubekiso ezweni lethu
Buzokwakhe EMELMOTH MHLELI: Ngithi mangithathe leli thuba ngiphawule ngokuvele kwelakho elingashayi eceleni ngeledlule. Lapho libike khona ngabafundi base sikoleni iBunguni Secondary esiseNkanini, eMuden ngaphandle kwaseGreytown.
Laba bafundi kubikwa ukuthi bangqongqise isikole, baphihliza izimoto zothisha ngamatshe, ngenxa yokuthi sekuphele amasonto amathathu bengaphakelwa ukudla namanzi engekho esikoleni.
Isenzo salaba bafundi ngisibona sisibi kakhulu futhi sixubene nokungazicabangeli nhlobo. Izigameko ezifuze lesi impela sizibona zanda eNingizimu Afrika lapho abantu makukhona abanganelisekile ngakho bebona kungcono bacekele phansi abanakho.
Kuyosisiza ngani ma-Afrika ukuzinqamula isandla ngoba sifuna umlenze? Uma sizoqhubeka kanjena impela sizibulala thina uqobo. Ngeke sibe nenqubekela phambili uma sizomosha esinakho futhi esikudingayo ngoba sifuna okunye.
Laba bafundi abashise isikole, kusasa yibona futhi abazobe sebebhikisha, bekhala bethi bashodelwa amakilasi.
Lokhu kwenzeka nje, emva kokuba kungakapheli ngisho unyaka isifundazwe sethu iKwaZulu-Natali sihlaselwe isiphepho nezimvula ezishiye kukhalwa nyakenye ezikoleni zakuleli. UMnyango wezeMfundo wacishe wafa olwembiza, nanamhlanje usazama ukulungisa isimo. Zizoqhamukaphi ke izimali zokulungisa esikwenze ngenhloso? Futhi kuyoze kube nini sakhelwa sibhidliza? Sbonisiwe Shezi EPINETOWN